विश्वमा एउटा यस्तो गाउँ जहाँ मानिसहरु मात्र होइन पशुपंक्षी समेत दृष्टिविहिन छन् « Sajha Page
विश्वमा एउटा यस्तो गाउँ जहाँ मानिसहरु मात्र होइन पशुपंक्षी समेत दृष्टिविहिन छन्
प्रकाशित मिति: September 14, 2018
एउटा यस्तो आश्चर्य र अनौठो गाउ छ जुन गाउ बारे थाहा पाउनु भयो भने अचम्मित हुनु हुन्छ।
यस्तो एउटा अनौठो गाउँ छ जहा मानिस मात्र होइन पशुपंक्षी पनि अन्धो हुन्छन् । उक्त टिल्टेकप नामक ठाउँमा भएका पशुपक्षी उड्न र खानेकुरा खोजेर खान सक्दैनन् ।
यो गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको आँखा त हुन्छ तर उनीहरु देख्न सक्दैनन् । यो गाउँमा जेपोटेक करिब ३०० रेनिडन जनजातिहरु रहेका छन् । भर्खरै जन्मिएका बच्चाहरु पनि आँखा देख्ने भएपनि उनीहरु विस्तारै आँखा देख्न छोड्छन् ।
अन्धो भएको कारण उनीहरु ढुङ्गामा सुत्ने गर्छन् । उनीहरुले कोदो र खुर्सानी खानेकुराको रुपमा खान्छन । उनीहरुले काठको हतियार प्रयोग गर्ने गर्छन् । उनीहरु सधै नाचगान रमाइलो गरेर राती खाना खाएर सुत्ने उनीहरुको परम्परा नै रहेको छ ।
स्थानियबासिन्दाको अनुसार त्यहा लाभजुएजा’ रुख देखेपछि मानिसहरु अचानक आँखा देख्न छोड्छन् । स्थानियको यस्तो दाबी पछि उनीहरु वैज्ञानिकहरुले त्यसको रहस्य खोजिरहेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै तथ्य फेला पारकको छैनन् ।
उक्त रुखमा भएको कालो अरिङगालको टोकाइबाट यस्तो भएको हुन सक्ने अनुमान छ । बारुलाले टोकेपछि भयानक जीवाणु शरिरमा प्रवेश गर्ने र आँखाको नसा बन्द गरेपछि आँखाको ज्योति गुमेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
यी १० लक्षण देख्नु भयो भने ढुक्क हुनुहोस तपाईले मनपराएको युवती तपाईकै
एनर्जी ड्रिंक्सले झन्डै ज्यान लियो, ज्यान त बच्यो तर खोपडी नै लग्यो (फोटो सहित)
कसरी हुन्छ लिङ्ग उत्तेजना ? लिङ्ग उत्तेजना नहुनुका कारण के हो ? यसलाई के ले प्रभाब पार्छ ?
के तपाईं बाईक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? कुन बाईकलाई कति मूल्य पर्छ ? जान्नुहोस (नेपालमा उपलब्ध सबै बाइकको मूल्य सुची सहित )
यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन, अब आफनो भबिष्य आफै थाहा पाउनुहोस(भीडीयो सहित)
जग्गा नापमानसम्बन्धि यी जानकारी तपाईंलाई छ ? जानी राखे राम्रो
सपनामा यी २५ चिज देख्नुभयो भने अशुभ हुन्छ !